कसले यिनीहरूलाई ध्यान दिइरहेको छ र यसको समाधान कसले खोजिरहेको छ ?
आमाबुबा भेट्ने सपना
चीनमा कैयौँ यस्ता बालबालिका छन्, जो निकै कम उमेरमै आफ्ना आमाबुबाबाट अलग हुन बाध्य छन् । आखिर कसले यिनीहरूलाई ध्यान दिइरहेको छ र यसको समाधान कसले खोजिरहेको छ ?
‘आमाबुबाको याद आइरहेको थियो’
यी बालकले करिब ८० किमि लामो यात्रा पूरा गरेका थिए । जुन यात्राको क्रममा बस कैयौँपटक होचो, अग्लो, खाल्टाखुल्टी भएको स्थानबाट पार भएको हुन सक्छ । तैपनि, दुवै बालक सही सलामत भेटिँदा बसका स्टाफ अचम्मित छन् । बसका एक कर्मचारीले बताएका छन्– यी बालक दुब्ला भएकाले बसको अन्डर क्यारिजमा सजिलै घुस्न सफल भए ।
चीनको तीतो सपना
यस घटनापछि मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘चाइना ड्रिम’ को सोचको खिल्ली उडाउन थालेका छन् । यो अवधारणा कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको हो, जसलाई २०१३ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रचारित गरेका थिए । यस अवधारणामा कैयौ“ व्यक्तिगत र राष्ट्रिय आदर्श तय गरिएका छन् । यीमध्ये एक हो, ०२० सम्म राष्ट्रिय गरिबी अन्त्य हुनेछ ।